Ichi chichava Lift, charger iyo ichakwanisa kuburitsa iyo Apple Watch | Ndinobva mac
Ichi chichava Lift, charger iyo ichakwanisa kuburitsa iyo Apple Watch
Haisi nguva yekutanga kuti tikupei majaja eiyo Apple Watch uye ndezvekuti sezvo isu tiri kuona zvitsva sarudzo isu tinoda kuigovana newe. Mune ino kesi iri charger iyo isati yatengeswa asi seiyo iyo Kickstarter mushandirapamwe Chichava chinhu chaicho kubva muna Gumiguru, ndipo panotanga kugadzirwa kwemazhinji uye kutumirwa kuchaitwa.
Hunhu hwechaja nyowani ndewekuti pamusoro pekuve neiyo minimalist dhizaini yakagadzirwa yealuminium uye zvedongo zvinhu, zvakare inokwanisa kuburitsa iyo Apple Watch painenge ichichaja. Izvi ndizvo chaizvo zvinotibata uye ndezvekuti hatina kumboona charger yerudzi urwu, iyo yaizobatanidza iyo yemagineti mhedzisiro neyeyeyesthetic imwe.
Kubva nhasi, bhajeti inokurudzirwa neavo vakafunga zano rechaja iri paKickstarter yatodarika, uye apo patinonyora chinyorwa ichi, mari yavakaunganidza nekutengesa kumberi i $ 57.183 ye $ 44.000 yavaida. Ndosaka tichikurudzira kuti upinde mune peji rerojekiti uye sarudza kana iwe uchida iyijaja yeApple Watch yako.
Sezvauri kuona pane peji rerojekiti, charger ine zvikamu zviviri zvakanyatsosiyaniswa, yekutanga ndiyo base, inova iyo ine iyo yese yekuchaja system uye yechipiri ndicho chinhu chinoburitsa uye icho panguva imwechete chine yemukati bhatiri yekuchinjisa iyo Apple Watch.
Apa tinoreva kuti hwaro hwe Elevator zvazvinoita kudzoreredza bhatiri remukati rechikamu chechipiri chechaja chinoburitsa uye gare gare iri bhatiri ndiro rinodzosera Apple Watch. Iyo yega iyoyo Tinofanirwa kuita kuisa iyo Apple Watch sekunge tiri kuiisa paruoko pedu uye ichatanga kuchaja.
Zvinofanira kutaurwa kuti kana ukaenda parwendo unogona kushandisa chikamu chinobvisa sebhatiri rebetsero reApple Watch uye ndezvekuti zvinokutendera kuti uwedzere kuwacha wachi kanokwana kaviri nemutero webhatiri remukati iro ine.
Mutengo wekugadzirwa kwevaya vanoda kupa pfungwa madhora makumi mana nemapfumbamwe kuti gare gare uende kunodhura $ 199. Pa peji re projekiti iwe uchaona kuti iwe une inopfuura imwe sarudzo uye ndezvekuti ivo vakaita mapaketi akasiyana ekutengesa, imwe yacho ine sarudzo yemwenje mudiki wavakadaidza Orb.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Ichi chichava Lift, charger iyo ichakwanisa kuburitsa iyo Apple Watch
David Christian Duque Gallego akadaro
Musoro wenyaya ... "Dzivisa" wakatsvedza ne "levitate" 😉
Pindura kuna David Christian Duque Gallego
Chii chakaitika kuApple panguva yekushaya kwaSteve Jobs?
Chekutanga mifananidzo yeiyo ichangovhurwa Apple Store muBrooklyn